I-Netflix vs Amazon Prime Video - Ukuqhathanisa Okuphelele - Ezokuzijabulisa
Njengoba wonke umuntu ehleli ekhaya kulezi zinsuku, izinsizakalo zokusakaza ezinjengeNetflix ne-Amazon Prime Video sezitholile ukuthandwa. Njengoba uhlobo lokuqukethwe lusha sha uma kuqhathaniswa nokwendabuko setha ibhokisi eliphezulu noma ikhebula . Ngaphezu kwalokho, akudingeki bahlole njengoba bengabanikazi beplatifomu, ngenxa yalokho okuqukethwe kujabulisa kulo lonke iqembu leminyaka.
Eminyakeni embalwa eyedlule, kwakungekho mncintiswano onjalo, kodwa manje wonke umuntu ufuna ucezu lukaphayi.
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Ukubuka konke okuyisisekelo
Ukubuka konke kwe-Netflix:
INetflix yasungulwa e-United States ngo-1997 futhi kusukela lapho, ibilokhu iheha ababukeli ngenxa yohlobo lokuqukethwe nokusebenziseka kalula. Kusukela manje, inani labasebenzisi ku-Netflix lifinyelela kwizigidi eziyi-167.1. Ngenxa yalokhu kwanda, benze imali engaphezulu kwama- $ 20.156 billion ngenzuzo.
Lokhu kwenze iNetflix yaba yindawo ephambili yokusakaza enkundleni.
Bhalisela i-Netflix Trial Free
Uhlolojikelele lwe-Amazon Prime Video:
Ngenkathi i-Amazon Prime Video isha sha ngokuqala konyaka ka-2006. Izinga lokukhula lihlukile kwi-Prime Video. Ngo-2008 inkampani yaphinde yakhipha insizakalo yokusakaza ku-Amazon Video ngokufunwa, kepha noma kunjalo, ayikwazanga ukuthola ukuthandwa okungako. Kuze kwaba ngonyaka we-2016 lapho i-Amazon Prime Video yethulwa eNdiya ngesinye sezinto ezikhethwe kahle kakhulu futhi yathola ukuthandwa kakhulu.
Kusukela manje, i-Amazon Prime Video inenani labasebenzisi abayizigidi eziyi-150 +. Imali etholwe yi-Amazon Prime Video icishe ibe yizigidi ezingama- $ 3.6, enikeza umncintiswano onzima kakhulu kuNetflix.
Bhalisela Isivivinyo Samahhala se-Prime Video
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Impi Yamanani
Masibe nombono wezinyoni ngezinhlelo zamanani ezinikezwa yilezi zinsizakalo zokusakazwa kwamavidiyo online.
Izinhlelo Zamanani eNetflix -
INetflix inezinhlobo eziningi zezinketho uma kukhulunywa ngamanani nezinhlelo. Ezinye izici zihlala zingaguquguquki, noma ngabe uthengela ziphi izinhlelo. Lokhu kufaka phakathi ukubuka kunoma iyiphi idivayisi, ama-movie angenamkhawulo, kanye ne- Imibukiso ye-TV , futhi ungakhansela noma kunini.
Uhlelo oluyisisekelo:Okuphansi kakhulu kuqala ku- $ 8.99 ngenyanga. Leli cebo linekhwalithi yevidiyo enhle efinyelela ku-480, futhi inani lezikrini umsebenzisi angazibuka likhawulelwe ku-1. Ngokuvumelana nezimo ukubukela ama-movie , Ikhombisa kunoma iyiphi idivayisi oyifunayo.
Uhlelo olujwayelekile:Iqala ku- $ 13.99 ngenyanga. Ikhwalithi yevidiyo ingcono kunecebo langaphambilini elikhuphukela phezulu ku-1080p. Ixhasa izikrini ezifika ku-2 ngasikhathi. Lolu uhlelo abantu abaningi abalukhethayo.
Uhlelo lwe-Premium:Njengoba igama liphakamisa, amanani entengo nawo akhokha kakhulu, azungeze u- $ 17.99 ngenyanga. Ixhasa i-4K ne-HDR, ngakho-ke isipiliyoni sokubuka sihamba phambili uma kukhulunywa ngama-premium. Izovumela futhi inani lezikrini ezi-4 ngasikhathi.
Izinhlelo Zentengo Ye-Amazon Prime Video -
I-Amazon inendlela ehlukile kuleli bhizinisi lokusakaza. Kuzofanele uthenge uNdunankulu ngohlelo lwabo lokulethwa ukuvula i-Amazon Prime Video nezinye izinzuzo. I-Prime Video ayivuleki nge-Prime kune-standalone isevisi yokusakaza , ethanda i-Amazon Prime Video. Kuyindaba ehlukile e-US lapho unenketho yokuvula i-Prime Video nje. Kodwa-ke, njengoba intengo ihamba, kunezindlela ezimbili ongakhetha ngazo i-Amazon Prime Video:
Izinhlelo Zanyanga zonke:$ 12.99 ngenyanga izokhokhiswa ngaphandle komkhawulo enanini lamadivayisi noma izikrini noma ikhwalithi yevidiyo. Ixhasa i-4K ephelele ne-HDR. Kunomehluko ongeke ukwazi ukukhansela noma kunini. Kufanele ulinde inyanga iqale ngaphambi kokuba ufise ukukhansela.
Izinhlelo Zonyaka:Lokhu kuzokubiza ngaphansi kwenyanga ngoba kuqala ku- $ 119 ngonyaka. Izici zihlala zinjalo, kepha manje usukhokha minyaka yonke kunokuba ukhokhe njalo ngenyanga.
Ividiyo ephambili ye-Amazon (njengezimele kuphela e-US):Ungathenga inzuzo ngo- $ 8.99 ngenyanga. Konke kuzohlala kufana, kepha ngeke ukwazi ukuthola izinzuzo ezinamathiselwe ohlelweni lwabo lokulethwa.
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Ikhathalogi Yokuqukethwe Kwevidiyo
Ikhathalogi yeNetflix iyamangalisa impela enezici; asikho esinye isiteji esingaphindeka.
Izinhlobonhlobo zama-movie / imibukiso: Inokukhulu impela uhlu lwama-movie / imibukiso okuba yizihloko ezingama-5665+. Alukho uhlobo olushiywe lungathintwanga ku-Netflix, kusuka ku-anime kuya esenzweni nakwidokhumentari. Futhi banenani elifanele lokwangempela, elikhethekile kubo kuphela. Ezinye zazo zibandakanya iPunisher enesilinganiso se-IMDB esingu-8.5, iBlack Mirror IMDB esilinganiselwa ku-8.8, Isilinganiso se-House of Cards IMDB esingu-8.6, Isilinganiso se-Dark IMDB esingu-8.8 esiningi.
I-algorithm yeNetflix ingakopisha okuqukethwe ngokuya ngokuncamelayo. Ngemuva kokubuka noma yimuphi umbukiso noma i-movie, izokucela ukuthi ulahle ukuthanda noma ukungathandi. Uma ukwenza, iNetflix izokukhombisa okuqukethwe okuthandayo futhi ngokuya ngokuncamelayo. Lesi ngesinye sezizathu ezinkulu zokukhetha ukungena kwiNetflix.
INetflix inganikeza izilinganiso zeminyaka ephelele futhi inezilawuli zabazali ezihamba phambili. Nekhono labazali lokukhiya i-Netflix lapho ingane yabo izama ukufinyelela kokuqukethwe okungu-18 +.
I-Amazon Prime -
I-Amazon Prime Video ithatha okuhlukile kulo lonke uhlelo lwe-algorithm. Lokhu kunokuqoqwa okubanzi kokuqukethwe.
Okunhlobonhlobo kwama-movie / imibukiso: Inani lemibukiso ekhona ku-Amazon Prime Video likhulu, likhuphukela ezihlokweni ezingama-20,392. Ingxenye ehamba phambili ngePrime Video ukuthi ingathola amalungelo ama-movie njengamanje asebenza ngama-heathers. Ngemuva kwenyanga noma ezimbili, ingangeza ifilimu kumtapo wezincwadi. Ngisho ne-Amazon Prime Video inganikeza okwangempela okuhle. Ezinye zazo zibala isilinganiso sabafana se-IMDB esingu-8.7, iMarvelous Mrs Maisel IMDB sika-8.7, i-Fleabag IMDB isilinganiso esingu-8.7, Isilinganiso se-Family Man IMDB esingu-8.3.
I-algorithm ye-Amazon Prime Video ingahlunga okuqukethwe ngokuya ngemizwa yakho. Uma ujabulile futhi ufuna ukubukela amahlaya anezinhliziyo ezilula, ungaya esigabeni semoods futhi waneliseke. Okufanayo kuya ngokudabuka, ukuthandana, noma isenzo. Into enhle kakhulu nge-Amazon Prime Video ukuthi ikhombisa isilinganiso se-IMDB khona lapho eduze kwama-movie's synopsis and shows. Ngenxa yalokhu, umsebenzisi angakhetha okuqukethwe ngokuya ngemizwa yakhe.
Uhlelo lokulinganisa lwe-Amazon Prime Video alukhuni kangako njengeNetflix; kumane nje kukalwe ngokusho kokuvinjelwa, hhayi imikhawulo enzima kanjalo.
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Isixhumanisi Somsebenzisi
I-interface-interface iyathandeka kakhulu emehlweni, futhi umsebenzisi uhehwa ngokushesha kumathayili. Kunikezwa imininingwane eminingi ngamakhadi amancane, okungathathi isikhathi esiningi ukuthi umsebenzisi afunde. Futhi, iqhubeka nokushintsha izithombe zekhava zamakhadi okwenza uhlelo luthandeke ngokwengeziwe. Kunezici ezengeziwe ezifana nokweqa noma ukubukela ngejubane elikhudlwana nokuzidlalela.
I-interface-interface iyisizinda lapho i-Amazon Prime Video entula khona okuningi. Kulula impela. Awekho amakhadi noma imininingwane ekhonjiswe kanjalo. Njengoba zintsha sha, zisebenza ekuthuthukiseni ulwazi lomsebenzisi. Ayinazo ezinye izici ngaphandle kokweqa.
I-Netflix vs Amazon Prime Video - Ukutholakala Kwedivayisi
1. Ukutholakala Kwedivayisi yeNetflix
INetflix iyatholakala kuwo wonke amadivayisi ongacabanga ngawo. Kusuka kuma-mobiles kuya kuma-consoles kuya kuma-laptops. Uzothola nenketho yokuqhubeka ubuke khona lapho ugcine khona kulawa madivayisi. I-interface yomsebenzisi, noma kunjalo, ihlala ifana ncamashi. Futhi iyatholakala kumadivayisi angaqasheki okusho ukuthi amathuluzi angenawo isilinganiso sesici esijwayelekile. Ingakwazi ukwelula ukulungiswa kwesikrini ngaphandle kokuyekethisa ikhwalithi. Okuqukethwe kwe-HDR kusekelwa ngokuphelele, futhi kuthatha inzuzo enkulu ngakho.
2. Ukutholakala Kwedivayisi Ye-Amazon Prime Video
Noma le sevisi yokusakaza iyatholakala kuwo wonke amadivayisi. Kodwa-ke, lapho uzama ukusebenzisa isici sokubuka esiqhubekayo kumafoni e-android ngenxa yezimbungulu ezithile, ihlala isilela. Futhi ayikusekeli ukulungiswa okweluliwe kwamadivayisi angafakwanga. Ubungako besici buxakile kuma-laptops, futhi okuqukethwe akutholakali kusikrini esigcwele.
Ngakho-ke, ngubani owinile ekugcineni, ake sixoxe?
AmananiI-Winner Amazon Prime Video.
Isikhombimsebenzisi somsebenzisi-Unqobile iNetflix.
Ukuhambisana kwedivayisi -Unqobile iNetflix.
Izici ezingeziwe-I-Winner Amazon Prime Video.
INetflix iyanqoba njengoba ikwazi ukuthola ukunqoba okuningi kune-Amazon ezindaweni eziningi. Yize kukuncane ohlangothini lwamanani, kufanelekile yonke impunzi. Okwangempela kweNetflix kungcono kakhulu kunalawo wamavidiyo we-amazon prime. Ubuchwepheshe be-UI buhle impela.
Ukutholakala kwedivayisi nakho kungcono. Ngakho-ke, uma ungachitha amadola ambalwa, zama i-Netflix. Yebo, izindaba ezinhle ukuthi futhi kukunikeza isilingo samahhala senyanga eyodwa. Ngakho-ke, ngithemba ukuthi unganquma ukuthi yikuphi okungcono ngokufunda i-athikili yethu. Sicela ulahle imicabango yakho ebhokisini lokuphawula ngezansi uma unakho.
I-hd tv ikhombisa online mahhala
Imidlalo ye-roblox idlala mahhala
ungathola kanjani ama-gamepasses wamahhala ku-roblox 2018
amawebhusayithi we-tv wamahhala awabhalisi
amafilimu aluhlaza okwesibhakabhaka ama-movie abukwa online